iOS 10.2 ga-eweta ọrụ bọtịnụ ụjọ | Akụkọ akụrụngwa
Oge ọ bụla ụlọ ọrụ Cupertino na-ewepụta ụdị ọhụrụ nke iOS, ọkachasị mgbe ọ bụ beta, nke nta nke nta ndị mmepe na-enyocha ya iji gbalịa ịchọta ọrụ niile Apple anaghị ekwupụta na nkọwa ya. Mbata nke iOS 10.2 na nke ikpeazụ ya, ka ọ dị ugbu a na beta, na-enye anyị bọtịnụ ụjọ ezoro n'ime sistemụ arụmọrụ. Igodo a ụjọ ga-eme ka ụdị mkpu dị na iPhone rụọ ọrụ ma kpọọ ndị ọrụ mberede. Ọrụ a nwere ike ịba uru dị ukwuu n'ihe mberede okporo ụzọ ma ọ bụ iji mee ka ebumnuche mmadụ ghara ịtụ egwu.
India bu otu n'ime mba ndi nwere nsogbu kachasi ike, ikpo ha n'uzo ufodu, na etinye Apple n'oge ha nwere ike ibido ahia ngwa ahia ya na mba. Otu n'ime ihe ikpeazụ gọọmentị India chọrọ nwere ime na ntinye nke bọtịnụ ụjọ, bọtịnụ enwere ike iji mee ngwa ngwa kpọọ ndị ọrụ mberede mgbe a wakporo ụmụ nwanyị ma ọ bụ nọrọ n'ihe egwu.
N'ụzọ ezi uche dị na Apple enweghị ebumnuche ịgbakwunye bọtịnụ ọhụrụ na ọdụ ya, yana obere ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka otu mba, yabụ tinyela ya n'ime bọtịnụ ezumike / mmalite. Nke a egwu button sma rụọ ọrụ site na ịpị ugboro ise na bọtịnụ ahụ, nke oge iPhone ga-amalite ịpụta ụda mkpu ma malite ịkpọ oku na ọrụ mberede.
Na pọdkastị anyị nwere na Actualidad iPhone, onye ọrụ ibe anyị bụ Luis Padilla gbalịrị ọrụ ọhụrụ a. Nwere ike ịhụ nsonaazụ ya na vidiyo dị n'elu. N'agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-amasị technology n'ozuzu, m nwere ike ikwu na ị sonyere anyị Podcast ebe Anyị anaghị ekwu maka Apple naanị, mana anyị na-ekwukwa banyere teknụzụ n'ozuzu yaỌ bụ ezie na ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị Cupertino na-arụ ọrụ pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » iOS 10.2 ga-eweta egwu bọtịnụ ọrụ
Google choro ijikota sistem na ngwa ngwa na gam akporo